မြန်မာပြည်မှာခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့PRIVATE SCHOOL ရဲ့လိမ်ညာမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » မြန်မာပြည်မှာခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့PRIVATE SCHOOL ရဲ့လိမ်ညာမှု
မြန်မာပြည်မှာခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့PRIVATE SCHOOL ရဲ့လိမ်ညာမှု
Posted by လင်းဝေ on Jun 11, 2010 in Other - Non Channelized | 10 comments
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလို့ အလုပ်လုပ်ချင်နေသူတွေကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေတာတွေကို အသည်းယားလွန်း မခံရပ်နိုင်လွန်းလို့ မေးလ်ထဲရောက်လာတာလေး ကူးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ကို စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းတဲ့ Law Inforcement ပါပဲ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသူတွေကလည်းလုပ်ပဲ လုပ်ရက်နိုင်လွန်းကြတယ်။ ဟိုတစ်လောက လည်း “ဖြိုးဓန” ဆိုလား အကြော်သည်ကုလားက
မြန်မာ ကလေးတွေကို နှိပ်စက်ပြီး အလုပ်မှာ ခိုင်းတာလည်း ဘာမှ ကိုမဖြစ်တာ။
အခုလည်း ဒီ သောက်သုံးမကျတဲ့ မဟာမြကျွန်းသာ ဆိုတာ ပိုင်တာက ကုလား။
သူ့အောက် က ကောင်တွေက ဘာကြောင့်များ လုပ်ပေးနေကြသလဲမသိဘူး။ ပေးတဲ့ လခ ကလည်း အစိုးရ အလုပ် လခ ကမှ ပိုများဦးမယ်။
*private school တွေဖွင့်တော့ M.Sc M.A
private school တွေကM.Sc M.A ၇ထားတဲ့သူတွေကိုဆရာမအဖြစိ study guide အဖြစ်ခန့်မယ်လို့ seven days news ဂျာနယ်မှာ
မဟာမြကျွန်းသာ(MMAC)ဆိုတဲ့ကျောင်းကM.Sc M.Aတွေကိုဆရာမအဖြစ် study guide အဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်မလဲဝင်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံတဲ့နေရာက ၆မိုင်ခွဲမှာ၇ှိတဲ့မူကြို တစ်ခုမှာပါ။
မူကြိုတောင်ဒီလောက်အဆင့်မြင့်ရင် private school ကပိုတောင်သားနားမယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။
(၃)MP3 MP4 လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးခွင့်မပြုဘူးတဲ့။
(၇)ကျောင်းသူများရဲ့အခန်းကိုroom service ၀င်ပေးရပါတယ်။
မဟာမြကျွန်းသာဆိုတဲ့ဒိprivate school ကပညာတတ်အမျိုးသမီးတွေကိုပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပြီး
အရမ်းကောင်းပြီးအဆင့်မြင့်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့မဟာမြကျွန်းသာprivate school ကိုတော့ပညာတတ်မိန်းကလေးများမလျှောက်မိပါစေနဲ့။
အမှားကြီးမှားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပြီးforward လုပ်ပေးကြပါလို့အကူအညီတောင်းပါတယ်။
Myanmar Red Cross Societies
09 855 3282
တကယ်အဲလို ကြီးလား ။ တကယ်သာဆိုရင်တော့မမိုက်ဖူးပဲ
မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ခိုင်းဘူးဆိုကတည်းက ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ကျန်နေသေးတဲ့ ဆရာမများ ကံမဆိုးကြပါစေနဲ့…
နောက်အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ငါးစာကိုသာမကြည့်ဘဲ ငါးမျှားချိတ်ပါ မပါကိုပါသေချာကြည့်ပါလို့ဘဲ
ပုံနဲ့ ရောတင်ရင် ပို့ ဒ်ကအသက်ပိုဝင်မယ်ထင်တယ်
တရားဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ပိုပြီး လုပ်ဆောင်လို့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. ဒီလိုမျိုးတွေ ကြုံနေရရင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ တိုင်စရာ တောစရာ မရှိကြတော့ဘူးလား ဟိုတခါကလည်း ဖြိုးဓန အကြော် နေရာက အလုပ်သမား ကို နိပ်စက်တာ မေးတခါရသေးတယ် အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်နေရင်တော့ ဒီပိုင်ရှင် ကုလား သူ ကုလား နိုင်ငံသာ ပြောင်းနေခိုင်းပေတော့။
ကြားရတာ တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောယုံလေးနဲ့ တော့ ဘာထူးလာမှာလဲ။ ကိုယ့်လို မျိုး နောက်လူ တွေ မခံရအောင် Forward Message လောက်နဲ့ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ Private School လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာကို လျစ်လျူ ရှု ပေးနေသလိုပဲ။ ဒီတော့ အဲဒီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းနဲ့ သေသေချာချာလုပ်ပြီး ဒီ website ပေါ်တင်လိုက်ပါလား ။ စာချုပ်ဆိုတာလဲ သိပ်ကြောက်နေဖို့ မလိုပါဘူး MA M Sc တွေကို အိမ်ဖော်လို ခိုင်းနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထားရင်တော့မသိဘူးပေါ့။ မဟုတ်လို့ ကတော့ မတရား တဖြင့် ခိုင်းတာပဲ ပြန် ခုခံ လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ခုန ကပြောခဲ့သလို ကိုယ့် ဘက်မှာ သက်သေ ဓါတ်ပုံ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ နဲ့ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှိရင်တော့ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ လဲ ရေးရဲ မှာပါ။ သတ္တိရှိရှိ၊ ဥာဏ်ရှိရှိ တုံ့ ပြန်လိုက်ရင် အောင်မြင်သွားမှာပါ။ တခြား လူတွေလဲ ဘေးကင်းသွားမှာပေါ့။
ရာထူးက Study Guide ဆိုရင် အထက်က တာဝန်တွေက သန့်ရှင်းရေး နဲ့လုံခြုံရေး တာဝန်တွေဖြစ်လို့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး ။
Hall Tutor တာဝန်ပါ ယူရတယ် ဆိုရင်တော့ အထက်က တာဝန်တွေမှာတာဝန်ကျသူတွေ ကို ကြီးကြပ်ပေးယုံပါပဲ . စာချုပ်လက်ခံရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ. ။ Salary ၄၅၀၀၀ ကလည်း Just Tutor Salary in government ပါ .တကယ်ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းတော့မနေသင့်ပါဘူး
ဒီလိုမျိုးတကယ်ရှိသလား။ သင်တန်းအာဏာပိုင်တွေက မြန်မာမဟုတ်ဖူးလား ။
အဲ့ဒိကျောင်းက ကြော်ငြာနဲ့ ပေါက်နေတာ
ဂုဏ်ထူးရဖို့အတွက် ကလေးတွေကို. အတင်းအကျပ်
ကလေးတွေရဲ့ လူမှုအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှူံးနေရတယ်
ကျွန်တော်သိတဲ့ ကျူရှင်ဘော်ဒါတစ်ခုဆိုရင် တည်ထောင်
တဲ့သူက စာရေးစာဖတ်တောင်မတတ်ဘူး ဒါပေမဲ့
လက်ထဲကြိမ်လုံးကိုင်ပြိး ဘယ်စာကိုဘယ်အချိန် ဘယ်နှစ်
နာရိအတွင်းရ ရမယ်ဆိုပြိးကျက်ခိုင်းတယ် မရ ရင် အသေ
ရိုက်တယ် ကလေးရဲ့ ဥာဏ်ရည်ကို မတိုင်းတာပဲ ကြိမ်လုံးစွမ်းပြနေတာ (သာကေတ ၈-ရပ်ကွက်ထဲမှာ
ရှိတယ်) အရိုက်အနှက် အလွန်ကောင်းတဲ့အတွက်